Zakariye Xaaji oo kashifay waxa ay ku kala duwan yihiin heshiiska dekedaha Boosaaso iyo Berbera – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Zakariye Xaaji oo kashifay waxa ay ku kala duwan yihiin heshiiska dekedaha Boosaaso iyo Berbera
Xildhibaan Zakariye Maxamuud Xaaji Cabdi oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo shaaca ka qaaday in heshiiska shirkadda DP World ee saldhiga militeri ee magaalada Berbera uu yahay mid halis ku ah dalka Soomaaliya.
Xildhibaan Zakariye oo wareysi siiyay mid ka mid ah idaacadaha ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa sheegay in saldhiga dekedda Berbera ee maamulka Somaliland uu dhinaca ammaanka qatar ka imaan karto islamarkaana dagaalka Yemen uu kusoo fidi karo gudaha dalka Soomaaliya.
Sidoo kale, xildhibaan Zakariye ayaa sheegay in heshiiska ay shirkadda DP World la gashay maamulada Puntland iyo Somaliland ee dekedaha Berbera iyo Boosaaso ay yihiin kuwa kala duwan.
Heshiiska dekedda magaalada Boosaaso ayuu xildhibaan Zakariye ku sheegay inuu yahay mid hormarin dhismeed lagu sameeynayo, balse tan Berbera uu ku tilmaamay inay tahay saldhig militeri oo uu Imaaraadka Carabta ku doonayo inuu halkaasi kaga dhisto.
“Hadii aa kala qaado heshiiska shirkadda DP World ay la gashay Somaliland iyo Puntland, waa kala duwan yihiin, maxaa yeelay heshiiska Somaliland waxaa ku jirta in saldhig militeri ay dowladda Imaaraadka Carabta ka dhisaneeyso Berbera, halka dekedda Boosaaso ay tahay mid hormarin dhismeed lagu sameeynayo, sidii uu hormarinta dhismeed Turkiga ugu sameeyay dekedda Muqdisho” Sidaasi waxaa yiri xildhibaan Zakariye.
Si kastaba, hadalkaan kasoo yeeray xildhibaan Zakariye Maxamuud Xaaji Cabdi ayaa u muuqdo mid uu ku difaacayo heshiiska ay Puntland la gashay shirkadda DP World ee ku saabsanaa dekedda Boosaaso, halka heshiiska Somaliland ee dekedda Berbera uu ku tilmaamay mid halis ah.